राप्तीमा बाढीले खतराको बिन्दु नाघ्यो, साइरन बज्यो, उद्धार टोली तयार – LIGHT NEWS
कोरोना अपडेटः थप ३७८ जनामा संक्रमण थप तीनको मृत्यु
च्याम्पियन्स लिगः युभेन्टस र रियल म्याड्रिड बाहिरिए
कतै तपाईको बच्चामा मोबाइल गेमिङको लत त छैन?
पोखराका १ पुरुषमा कोरोना, गण्डकी प्रदेशमा ११ संक्रमित थपिए
राप्तीमा बाढीले खतराको बिन्दु नाघ्यो, साइरन बज्यो, उद्धार टोली तयार
June 20, 2020 June 20, 2020 Subas B.K0
पोखरा, असार ६। शनिवार विहानैदेखि लगातार भैरहेको वर्षाले राप्ती नदीमा पानीको सतहले खतराको बिन्दु’ पार गरेर धेरै माथि वगिरहेको छ । दांग, रोल्पा, प्युठान र बाँकेमा लगातार परेको वर्षाले राप्ती नदीमा पानीको सतह ५.४० मिटर भन्दा बढी पुगेपछि खतराको निशान पार गरेको मानिन्छ ।
शनिवार बेलुका ६.४५ बजे नदीको सतहले ५.७४ मिटर पार गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुमवांगले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले साँझ पौने सात बजेतिर नदीको सतहले ५.७४ मिटर पार गरेकोले बाढीको ठूलो खतरा देखिएको जनाउनुभयो । पानीको सतह ६ मिटर पुगेपछि राप्तीमा बाढी आउने र सो बाढीले बाँकेका धेरै ठाउँमा क्षति पुर्याउने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुमवांगले कुसुममा रहेको सो बाढी मापन केन्द्रबाट बाढी सहितको नदी होलियासम्म पुग्न करिब ४ देखि ५ घण्टा लाग्ने भएकोले तत्काल खतराको साइरन बजाईएको बताउनुभयो ।
साइरन बज्ने वित्तिकै नदी पस्ने संभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु सुरक्षित स्थानमा जान थालेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न एफएम रेडियो र अन्य माध्यमबाट संभावित खतरामा रहेकाहरुलाई अग्लो ठाउँमा जान सूचना तथा जानकारी दिने काम गरिएको छ ।
जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बाँकेका सूचना अधिकृत गौरी बुढाथोकीले नदीको सतहले खतराको विन्दु पार गरिसकेकाले बाढी पस्ने संभावित क्षेत्रहरुमा साइरन बजाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका १ देखि ७ सम्मका वडाहरु, डुडवाका १ देखि ३ र नरैनापुरका ५ र ६ नम्बर वडा अत्याधिक जोखिममा रहेका छन् । नदी मापन केन्द्र रहेको कुसुमबाट होलियासम्म पानी आउन करिब ४ देखि ५ घण्टा लाग्ने बुढाथोकीले बताउनु भयो । राप्ती नदीमा पानीको सतह ५.४० मिटर पुग्दा फत्तेपुर, होलिया, बेतहनी, कम्दी, गंगापुर, नरैनापुरमा डुवान हुने गर्दछ । अहिले नदीको सतहले ५.७४ मिटर पार गरिसकेकोले ती क्षेत्रमा डुबान हुने निश्चित भएको छ ।
भारतले राप्ती नदीमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँधका ढोकाहरु समयमा खोलिदिँदा डुवानको जोखिम कम हुन्छ । तर, बाँधको ढोकाहरु खोल्दा आफ्नो देशमा डुवान हुने भएकाले भारतले ढोका खोल्दैन । जसले गर्दा बाँकेमा डुबान हुँदै आएको छ ।
जिल्ला आपतकालीन कक्षले उद्धार सामाग्रीसहित उद्धार टोलीलाई राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुरमा सतर्क अवस्थामा राखेको जानकारी दिएको छ ।
नदी वरिपरिका गाउँमा पानी पस्ने अवस्था आउने बित्तिकै उद्धार टोली गाउँमा पुगिसक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
राप्ती नदीले खतराको संकेत पार गरेर माथि बग्न थालेको जानकारी साइरन मार्फत आउने वित्तिकै संभावित सबै क्षेत्रमा अलर्ट जारी गरेर सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बताउनुभयो । यो खबर सिराज खानले गोरखापत्रअनलाइनको लागि लेख्नुभएको छ।
नेपालमा थप ४२६ सङ्क्रमित, कुल ८ हजार २७४
गण्डकी प्रदेशः थप १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
शालोम ए.जी चर्चका सिफास रानाले जिते गायन प्रतियोगिता
March 8, 2020 March 8, 2020 Subas B.K
च्याम्पियन्स लिगः सिटीलाई हराउँदै टोटेनहम सेमिफाइनलमा
April 18, 2019 April 18, 2019 Subas B.K
February 19, 2019 February 19, 2019 Subas B.K
आइपीएलमा चिनियाँ प्रायोजकलाई लिएर भारतमा विवाद चक्र्यो
थप ४१८ मा सङ्क्रमण, कुल २१ हजार १६८
कोरोना अपडेटः थप ३७८ जनामा संक्रमण थप तीनको मृत्यु August 8, 2020
च्याम्पियन्स लिगः युभेन्टस र रियल म्याड्रिड बाहिरिए August 8, 2020
कतै तपाईको बच्चामा मोबाइल गेमिङको लत त छैन? August 7, 2020
पोखराका १ पुरुषमा कोरोना, गण्डकी प्रदेशमा ११ संक्रमित थपिए August 6, 2020
आइपीएलमा चिनियाँ प्रायोजकलाई लिएर भारतमा विवाद चक्र्यो August 4, 2020
थप ४१८ मा सङ्क्रमण, कुल २१ हजार १६८ August 3, 2020
भालुपहाडस्थित सेती खोलामा भेटियो स्याङजाका पंकज गिरीको कंकाल August 3, 2020
मेलम्चीमा पहिरो ८ वेपत्तामध्ये ३ जनाको शव भेटियो August 3, 2020
कोरोना अपडेटः थप २४६ जनामा सङ्क्रमण, कुल २० हजार ३३२ पुग्यो August 2, 2020
नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल ‘१ घण्टाको यात्रा १० मिनेटमै’ August 2, 2020